Ciise sharciguu oofiyey | Apg29
Ma waxaan u taraysaa?
Mid ka mid ah Dalka ugu weyn ee in ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah ugu badato maanta waa in aynu ilaalino sharciga, waayo, Ciise "rumoobay" waxaa.
söndag, 15 december 2019 23:55
Marka Ciise wuxuu u dhintay iskutallaabta dusheeda, ayuu qayliyey,
"Waa dhammaatay!" (John 19:30)
Maxay ahayd wax uu gaadhay?
Haddii Ciise ayaa dhameystirtay sharciga, sida ay tahay in aynu ka dibna ay awoodaan si ay u dhammeystiraan? Si fiican uma aanu si fiican u samayn kartaa ka badan Ciise?
Sharciga ayaa waxaa ku qancay soo aaminsan
Saaxiibada qiimaha badan, waxa aanu kaa aqbali dhamaystirka sharciga by aan helno Ciise iyo rumaysan isaga. Waxaan aan kula kulmi kartaa sharciga, laakiinse sharcigu inagu buuxsamo kuweenna helo rumaysadka xagga Ciise, maxaa yeelay, waxaa doortay kan ku oofiyey iyo taamyeelay waa.
Romans 8: 3aad Waayo, waxa ay ahayd wax aan macquul aheyn, waayo, sharciga, maxaa yeelay, wuu itaaldarnaa jidhka aawadiis, ayaa Ilaah sameeyey markuu u soo diray Wiilkiisa masaal jidhka dembiga leh oo dembi, wuxuuna xukumay dembigii jidhka ku jiray, 4 si ay u qiil dalabka sharciga u noqon lahaa na in kuwaas oo aan ku noolayn xagga jidhka, laakiin ka dib markii Ruuxa.
Waxaana aanu buuxin sharciga by samaynta shuqullada u gaar ah, waayo, badbaadintu - ama sida ay ugu inta badan maalmahan naadiyey, si ay u ilaaliyaan badbaado noo noqo. - inaad dhawrtaan badbaadintaada by haysta soomi Ciise, sababta oo ah waxa kii uu dhammaystay iyo sharciguu oofiyey waa.
Waa maxay sharciga?
Waa maxay wax aan sharcigu lahayn? Ma mass ee sharciyada iyo qodobo in aan u baahanahay in ay sii? No, ma run ahaantii.
Sharcigu waa injiilka sababtoo ah waa wax Ciise ku saabsan. Xusuusnow warwareega Emma'us? Sidaas halkan waxa ku qoran Kitaabka Quduuska ah:
Luke 24:25. Markaas ayaa sheegay in uu [Ciise] ku yidhi, Kuwiinna doqonnada, sidaas dheg aad tahay qalbiga inuu rumaysto wixii nebiyada oo dhammi ay ka hadleen! 26. ma waajib Masiix inuu waxaas oo dhan ku silco oo uu ammaantiisa markaas galaan? 27. Markaasuu wuxuu bilaabay inuu Muuse [Law ah] iyo nebiyada oo dhan oo leh, iyo u sharaxday in wixii isagii u yimid oo dhan Qorniinka.
Qorniinka oo dhanna waxa ay sheegtay in wax Ciise ku saabsan, iyo sidaas oo kale in sharciga.
Waxaad ka akhrisan khalad samayso Kitaabka Quduuska ah haddii aad u akhriyo sida kitaabkii sharcigii in aad Darwiish inay kulmaan, laakiin baad u akhridaa midig haddii aad Ciise iyo fadligiisa arko, oo uu dhameystirtay dhammaan waxa ku qoran isaga ku saabsan. Ma aha in aad ka akhrisan Kitaabka Quduuska ah sida kitaabkii sharcigii ah, laakiin sida nådebok a - nimcada Ilaah ina siiyey Ciise Masiix!
Kitaabku waxa uu si cad u sheegayaa in haddii aan Masiixiyiinta odhan, Dembi ma lihin, ka dibna waxaan ku khiyaanayn nafteena. Laakiin ma aha waxaan rumeeyey ee Ciise ku badbaado? Laakiin sida aan yeelan karaan dembiga inagu dhex jira?
1 Yooxanaa 1: 8. Haddaynu nidhaahno, Dembi ma lihin, annaga qudhayadu khiyaanayn oo runtana kuma ay inaguma jiro.
Waxaad arki, inkastoo aan Dembi inagu dhex jira, waxaan noqoto badbaadiyey in aan helno Ciise iyo rumaysan isaga. Waxaad aan la badbaadin doonaa by joojinta oo samaynaya, waad badbaadi doontaa Ciise hesho. Laakiin marka aad leedahay Ciise, aadan dembaajiyey.
Waxaad markaa dembi ka joogsan karin, sababtoo ah aadna ku badbaaddeen oo aaminsan in Ciise. ha joojin inaad dembaajiyey si ay u badbaadaan. Waxaa uma shaqeeyo. Waa Ciise Badbaadiya iyo camal lahayn.
Oo sidaas daraaddeed xaaladda sidoo kale waa la beddelidda. Towbad keenku waa hadiyad in aad aqbasho lagu helo rumaysadka xagga Ciise.
Falimaha Rasuullada 11:18. Oo markay taas maqleen, waxay siiyeen aamuseen, Ilaah bayna ammaaneen, oo wuxuu ku yidhi, markaas ayaa Ilaah siiyey dadka aan Yuhuudda ahayn ayaa sidoo kale toobadkeen inay nolol helaan.
No mid ka mid ah uu tawbad keeni karaa in uu awood u gaar ah. dhegta Salvation hadiyad in aad aqbasho by iimaan. Ciise ayaa wax walba si cad sidaa daraadeed waxa kaliya ee na si ay u aqbalaan. aadna ku badbaaddeen rumaysadka ee Ciise by nimcada Ilaah, wax kasta oo ka shaqeeya. mid ka mid No badbaadin shuqullada.
Iyo si la mid ah, sidoo kale waa marka ay timaado in la sii wado in ay badbaadada. Waxaad loo kaydin doonaan by nimcada Ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga Ciise. Ma aha sababtoo ah waxaad awood u nool Heerka sare oo gaar ah. Waxaan kuwaas oo aan la noolaan karaan in heer ku filan sare in la dhowro ee badbaadada. fikirka noocan oo kale ah waa khalad iyo sharci yaqaano.
Sidee inta badan hadalnay nahay inaynu ku badbaadi nimco eegin shuqullada sharciga ah? Laakiin marka ay timaado in la sii wado in badbaado noo sheeg qaar ka mid ah si lama filaan ah waxaan u leeyihiin in ay shuqulladii ka sameeyaan. Ka dibna tag nimcada sharciga oo aan sharciga ku badbaadin karto. Sharciga Axdiga Hore sida maqleyn qayb ka yahay gartaa dembiga, ma badbaadin karo.
Marka laga shuqullada sharciga ah
No, waannu badbaadi doonnaa rumaysadka ee Ciise, iyadoo aan loo eegin ku noqon shuqullada sharciga. Oo aan la sii raagayaan doonaa helo rumaysadka xagga Ciise eegin shuqullada sharciga ah. In si la mid ah aan laga badbaadin doonaa hal maalin lagu helo rumaysadka xagga Ciise eegin shuqullada sharciga ah marka aan guriga ku soo noqon samada.
Waxaa jira qaar ka mid ah lagivrare in aannu mar xukuma dadka sida sharcigu leeyahay, oo waxaad iyaga ku amartaa inay u dhawraan. Sharcigu waxa uu sheegay in iyagu ma ay awoodaan in ay sii joogaan, sababtoo ah waxaan dhammaan way wada dembaabeen (Romans 3:23), oo waxaan oo dhan waxay leeyihiin dembi nolosheena, sida aynu hore u läste.De waa sidaas u adag isla markaana unloving xaraysan Kanu waa warka culus ee sharciga ah ku dul bulshada halkaas oo fadhiya ilaaliyo hore ee shaashadda kombiyuutarka. iyagu ma ay kor farta inuu culeyska ka. waa bilaa naxariis ah oo wuxuu illoobay jacaylka Ilaah - jacaylka uu muujiyey markii Ciise wuxuu u dhintay dembiyadeenna. Ugu dambeyntii, haddii aad dhab ahaan doonayaan in ay ku oofiya sharciga iyo waxaan soo qaadan doonaa Qorniinku qaar ka mid ah in la baraa sida ay tahay in la sameeyo.
Love sharciga dhammeeyo
Romans 13: 8-dii Ha lagugu leeyahay qof kasta oo wax, marka ay timaado in midkiinba midka kale jeclaado mooyaane. Waayo, kii deriskiisa jeclaadaa oofiyey sharciga .
Rome 13:10. Love ma jirin waxyeello ay deriskiisa, oo sidaas daraaddeed jeclahay waa sharciga ku dhammaaday .
Galatiya 6: 2aad Qaad midba midka kale culaabta, iyo buuxi sidan sharciga Masiixa .
Yacquub 2: 8-dii Haddii aad la kulanto k ah sharciga ungliga siduu Qorniinku leeyahay, Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada , waxaad rätt.9 sameeyo. Laakiin haddii aad u kala duwan ee dadka aad dembaabtaan, oo ay noqoto sharciga shaaca ka qaaday xadgudbayaasha sida.
aan sharci noocan oo kale ah waxay noqon karaan kuwo ay adag tahay in uppfylla.Allt aad u baahan tahay inaad samayso waa in jacaylka. Iyo sida aan u jeclaan karaa? Maxaa yeelay, Ciise Masiix ayaa marka hore u jeclaa os oo dembiyadayada naga nadiifi.
Publicerades söndag, 15 december 2019 23:55:25 +0100 i kategorin och i ämnena: